Terms And Conditions - ငါးမျှားသည်
Home » စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ
ရှေ့မဆက်ခင်, ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သောကြောင့် ဤသဘောတူညီချက်ကို ဖတ်ရှုပါ။, ရှာဖွေကြည့်ရှုခြင်း။, သို့မဟုတ်ပါက ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဖော်ပြထားသော စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများအားလုံးအတွက် သင့်သဘောတူညီချက်ကို ညွှန်ပြပါသည်။.
1. အချက်အလက်များ၏ တိကျမှုနှင့် ပြည့်စုံမှု
ဤဆိုက်တွင် ရရှိနိုင်သော အချက်အလက်များသည် မမှန်ကန်ပါက FISHISHERE သည် တာဝန်မရှိပါ။, အပြည့်အစုံ သို့မဟုတ် လက်ရှိ. ဤဆိုက်ရှိအကြောင်းအရာအား ယေဘူယျအချက်အလက်များအတွက်သာ ထောက်ပံ့ပေးထားပြီး အဓိကမတိုင်ပင်ဘဲ ဆုံးဖြတ်ချက်များချရန်အတွက် တစ်ခုတည်းသောအခြေခံအဖြစ် အားကိုးခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းမပြုသင့်ပါ။, ပိုမှန်တယ်။, ပိုမိုပြည့်စုံသော သို့မဟုတ် အချိန်နှင့်တပြေးညီ သတင်းအရင်းအမြစ်များ.
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဆိုက်၏ အကြောင်းအရာကို အချိန်မရွေး ပြုပြင်မွမ်းမံပိုင်ခွင့်ကို လက်ဝယ်ရှိပါသည်။, သို့သော် Site ပေါ်ရှိ မည်သည့်အချက်အလက်ကိုမျှ အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိပါ။. ဆိုက်အား ပြောင်းလဲမှုများကို စောင့်ကြည့်ရန် သင့်တာဝန်ဖြစ်ကြောင်း သင်သဘောတူပါသည်။. စခရင်ပုံသေများနှင့် ဓာတ်ပုံနည်းပညာများကြောင့် အချို့အရာများသည် အမှန်တကယ်အရွယ်အစားထက် အနည်းငယ်ပိုကြီး သို့မဟုတ် သေးငယ်နေနိုင်သည်။. အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရှင်းလင်းစွာပြသနိုင်ရန် အခြားအရာများကို အမှန်တကယ်အရွယ်အစားထက် ပိုကြီးသောနေရာတွင် ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါသည်။, ပစ္စည်းတစ်ခုလုံးကိုပြသရန်အတွက် အမှန်တကယ်အရွယ်အစားထက်သေးငယ်သည်။.
2. တတိယပုဂ္ဂိုလ် အကြောင်းအရာ
အကြောင်းအရာအချို့, ဤဆိုက်ရှိ အင်္ဂါရပ်များနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း - Third Party ပံ့ပိုးပေးသူများမှ ပိုင်ဆိုင်ပြီး လည်ပတ်နိုင်ပါသည်။. သင်၏အသုံးပြုမှုနှင့် ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာနှင့် အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု, အင်္ဂါရပ်များနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း အကြောင်းအရာသည် သီးခြား စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် သက်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။.
ဒီအပေါ်မှာ, ဤအသုံးပြုမှု စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသည် သင့် Third Party Content ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း သင်အသိအမှတ်ပြုပြီး ထိုသို့သောတတိယပါတီဝန်ဆောင်မှုပေးသူများမှ ပေးဆောင်သော အသုံးပြုမှုစည်းကမ်းချက်များကို သင်လိုက်နာပြီး လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပါသည်။.
သင် WE တာဝန်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ခံထိုက်ပေ FOR third party အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်ပြုမူသောအမှု OR third party ပေးပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်အထက်ပါတစ်ခုခုကိုနဲ့အတူလှုပ်ရှားမှုအတွက်ရရှိနိုင်ရန်သင့်ရှိအဆက်အသွယ်မဆိုတောင်းဆိုမှုများ OR အခြားသတင်းများအကြောင်းတရားများလျှောက်လွှာ third party ဆန့်ကျင်လတံ့သောမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုဝန်ခံ ပံ့ပိုးပေးသူ(၎) US မဟုတ်ပါ။.
3. ဝဘ်ဆိုက်တွင် ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု
ဤဆိုက်ရှိ အကြောင်းအရာအားလုံး (အပါအဝင်, အကန့်အသတ်မရှိ, စာသား, ဒီဇိုင်း, ဂရပ်ဖစ်, လိုဂိုများ, အိုင်ကွန်များ, ပုံများ), FISHISHERE မှပိုင်ဆိုင်ပြီး သီးသန့်ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။, ၎င်း၏လိုင်စင်များ သို့မဟုတ် ၎င်း၏အကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေးသူများနှင့် မူပိုင်ခွင့်ဖြင့် ကာကွယ်ထားသည်။, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် အခြားသော တည်ဆဲဥပဒေများ.
ငါးမျှားသည်, သို့မဟုတ် ၎င်း၏လိုင်စင်ပေးသူများ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေးသူများ, ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ပေးထားသည့် အကြောင်းအရာအတွက် ခေါင်းစဉ်အပြည့်အစုံနှင့် အပြည့်အစုံကို ထိန်းသိမ်းပါ။, သက်ဆိုင်သည့် ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်များအားလုံး အပါအဝင်, ကုမ္ပဏီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ အချိန်မရွေး ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သော လိုင်စင်တစ်ခုအောက်တွင် ဤပစ္စည်းကို သင့်အား ပေးဆောင်ပါ။. FISHISHERE သည် FISHISHERE နှင့် မသက်ဆိုင်သော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခွင့်အရေးများကို ထိပါးစေမည်မဟုတ်ကြောင်း ဤဆိုက်ပေါ်ရှိ ပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းသည် သင့်အား အာမခံချက်လည်းမပေးကြောင်း၊.
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အကြောင်းအရာအား အသိပေးချက်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။, အသုံးအနှုန်းများ, နှင့်ဤသဘောတူညီချက်တွင်ဖော်ပြထားသောအခြေအနေများ. အစုံပါပဲ။, စည်းမျဥ်းတွေကို လိုက်နာလိမ့်မယ်။, လမ်းညွှန်ချက်များ, မူဝါဒများ, အသုံးအနှုန်းများ, ၎င်းတို့ကို သင်အသုံးမပြုမီ ယင်းဝန်ဆောင်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အခြေအနေများ.
သင့်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စာရင်းသွင်းခြင်းဖြင့် မှန်ကန်ကြောင်းဖော်ပြရန် သဘောတူပါသည်။, တိကျသည်။, သင့်အကြောင်း လက်ရှိနှင့် ပြည့်စုံသော အချက်အလက်.
မှတ်ပုံတင်ထားကြောင်း သိရသည်။, စကားဝှက်ကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည်။. သင့်စကားဝှက်ကို ကာကွယ်ရန် သင့်တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။. ထုတ်ပြန်ချက်အားလုံးအတွက် သင့်တွင် တာဝန်ရှိကြောင်း သင်သဘောတူပါသည်။, ဖြစ်ပေါ်လာသော လုပ်ရပ်များ သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှုများ, သင်၏စကားဝှက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်. ယုံကြည်ရန် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုရှိလျှင် သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုခုကို သတိထားပါ။, ခိုးယူခြင်း သို့မဟုတ် သင့်စကားဝှက်ကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အသုံးပြုခြင်း။, FISHISHERE ကို ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါ။.
သင်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။, ကော်ပီ, သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သောအသုံးပြုမှုအတွက် ဆိုက်တွင်ပါရှိသောပစ္စည်းများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပါ။, မူပိုင်ခွင့်ကို သင်မွမ်းမံခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်ခြင်းမပြုရဟု ဖော်ပြထားပါသည်။, သင်ဝင်ရောက်အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းပေါ်တွင် ပေါ်လာသည့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် သို့မဟုတ် အခြားမူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ သတိပေးချက်, ကော်ပီ, ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ သို့မဟုတ် ပရင့်ထုတ်ပါ။. ဝဘ်ဆိုက်ရှိ အခြားအကြောင်းအရာများကို အသုံးပြုခြင်း။, ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွင် အကန့်အသတ်မရှိ ပါဝင်ပါသည်။, ဖြန့်ဖြူးခြင်း။, ကူးစက်ခြင်း, စွမ်းဆောင်ရည်, ထုတ်လွှင့်သည်။, ထုတ်ဝေမှု, တင်ခြင်း။, လိုင်စင်, ပြောင်းပြန်အင်ဂျင်နီယာ, လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချခြင်း။, သို့မဟုတ် ဆင်းသက်လာသော လက်ရာများ ဖန်တီးခြင်း။, ပစ္စည်းတစ်ခုခု, သတင်းအချက်အလက်, ဆော့ဖ်ဝဲ, ဆိုက်မှရရှိသော ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ, သို့မဟုတ် FISHISHERE အတွက် အပြိုင်အဆိုင် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် Site ကို အသုံးပြုခြင်း။, အတိအလင်းတားမြစ်ထားသည်။.
တင်ခြင်းမပြုရပါ။, ဖြန့်ဝေ, သို့မဟုတ်ပါက ဤဆိုက်မှတစ်ဆင့် မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမဆို ထုတ်ဝေပါ။, သတင်းအချက်အလက်, သို့မဟုတ် အခြားပစ္စည်း (a) မည်သည့် bug များ ပါဝင်သည်။, ဗိုင်းရပ်စ်များ, ပိုးကောင်များ, ထောင်ချောက်တံခါးများ, ထရိုဂျန်မြင်းများ, သို့မဟုတ် အခြားသော အန္တရာယ်ရှိသော ကုဒ် သို့မဟုတ် ဂုဏ်သတ္တိများ; (ခ) အသရေဖျက်သည်။, ခြိမ်းခြောက်ခြင်း။, အသရေဖျက်သည်။, ညစ်ညမ်းသော, မဖွယ်မရာ, ညစ်ညမ်းသော, ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း, သို့မဟုတ် U.S ၏ ဥပဒေများအောက်တွင် အရပ်ဘက် သို့မဟုတ် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ တာဝန်ခံမှုတစ်ခုခုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။. သို့မဟုတ် ကျင့်သုံးနိုင်သော အခြားနိုင်ငံများ၏ ဥပဒေများ; သို့မဟုတ် (ဂ)မူပိုင်ခွင့်များကို ချိုးဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ချိုးဖောက်ခြင်းများ, မူပိုင်ခွင့်များ, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ, ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသား, ကုန်သွယ်မှုလျှို့ဝှက်ချက်များ, သို့မဟုတ် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ အခြားကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးများ.
သင့်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ဤအသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများကို လက်ခံခြင်းဖြင့်, သင်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။ 18 အသက် နှစ်များ သို့မဟုတ် အထက်. အောက်မှာ ရှိရင် 18 မိဘ သို့မဟုတ် တရားဝင်အုပ်ထိန်းသူ၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်သာ ဤဆိုက်ကို အသုံးပြုပါ။. ဤသဘောတူညီချက်၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။, ဤအရာက သင့်အား အကန့်အသတ်တစ်ခုပေးသည်။, ရုပ်သိမ်းနိုင်သော, လွှဲပြောင်းမရနိုင်သော, စျေးဝယ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာမဟုတ်ဘဲ စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုရန် သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကိုယ်စား အသုံးပြုရန်အတွက်သာမဟုတ်ဘဲ သင့်အင်တာနက်ဘရောက်ဆာတွင် ၎င်းကိုပြသခြင်းဖြင့်ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုရန် သီးသန့်လိုင်စင်မဟုတ်ပါ, FISHISHERE မှ ကြိုတင်ခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်း အတိအလင်း မှလွဲ၍. ဤသဘောတူညီချက်ကို ချိုးဖောက်မှုတိုင်းသည် သင့်အား အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ဤစာပိုဒ်ပါရှိသည့် လိုင်စင်အား ချက်ခြင်းရုတ်သိမ်းခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်။.
FISHISHERE သည် ဤဆိုက်အတွက် မည်သူမဆို မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ငြင်းဆိုရန် သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ရန် အခွင့်အရေးကို လက်ဝယ်ရှိပါသည်။, မည်သူ့ကိုမဆို ဤဆိုက်မှ ဖယ်ရှားပါ သို့မဟုတ် မည်သူမဆို ဤဆိုက်ကို မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆို အသုံးပြုခြင်းအား တားမြစ်ပါ။.
5. ဤအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို ပြောင်းလဲမှုများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဆိုက်နှင့် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားပါသည်။.
FISHISHERE သည် အခွင့်အရေးကို လက်ဝယ်ရှိသည်။, ၎င်း၏တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း, ပြောင်းလဲရန်, ပြင်ဆင်ပါ။, ဤအသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများ၏ မည်သည့်အပိုင်းကိုမဆို ထည့်ပါ သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားပါ။, တစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း, အချိန်မရွေး, ဆိုက်ပေါ်တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော စည်းကမ်းချက်များကို တင်ခြင်းဖြင့်. အသုံးပြုမှု စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများတွင် ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သော ပြောင်းလဲမှုမှန်သမျှကို အခါအားလျော်စွာ စစ်ဆေးရန် သင့်တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။. အသုံးပြုမှု စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ သို့မဟုတ် အခြားမူဝါဒများ အပြောင်းအလဲများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် ဆိုက်ကို ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းသည် သင်သည် ပြောင်းလဲမှုများကို လက်ခံသည်ဟု ဆိုလိုသည်။.
ငါးမျှားသည် © 2021
8400 N.W. 25th လမ်း, အစုံပါပဲ 100, BM#၁၅-၀၁၈၃၇, Doral, ဖလ 33198-1534, ယူအက်စ်
စခန်းချ & တောင်တက်
0 items လှည်း